I-Statdash: Yakha iDashboard yokugqibela | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 4, 2012 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Kubonakala ngathi suku ngalunye kuya kufuneka songeze esinye isixhobo sokujonga iimetrikhi ezintsha ezinikezela ingxelo kubathengi bethu. Ixesha elingaphezulu, siqokelele inani lokubhaliswa kwe-SaaS esingena kwaye siphume kuyo yonke imihla. Kunzima kakhulu ukuba siye safuna izixhobo zophuhliso-kodwa kuya kuba yindleko ukudibanisa ii-API ezininzi kunye nokuzigcina. Ngombulelo, omnye umntu wacinga ukuba yayingumcimbi ngokunjalo kwaye waphuhliswa IStatdash, i umenzi weemashup umenzi.
I-Statdash inezinto ezimbalwa-mhlawumbi eyona ilungileyo yeyokuba iqala ukurekhoda idatha yakho kwisicelo sayo mzuzu ukongeza i-metric ongathanda ukuyongeza. Ukuqokelelwa kweewijethi onokongeza kwizithuba zentlalo, ukukhangela, ividiyo, yasekhaya, kunye nezinye iindlela zentengiso ezikwi-Intanethi. Banokutsala iimetwork eziphambili kuGoogle Analytics, izixhobo zeWebmaster, Facebook Insights kunye neYouTube Insights. Banamawijethi abeka iliso kukhankanywe uphawu lwegama lakho kunye namagama aphambili kwi-Twitter, iisayithi zeendaba, kunye neeblogi. Unokongeza idatha yakho kwinkonzo yakho ye-imeyile, i-CRM yakho, okanye inkqubo yakho yokuthengisa.
Amaxabiso axhomekeke kwinani lamawijethi onawo - imimandla kunye nabasebenzisi beza ngokungenamda ngeqonga. Unokuseta kwakhona izaziso ngayo nayiphi na ingxelo yeetriki kunye nemveliso kwifomathi entle, eprintiweyo. Yizame simahla ukuya kuthi ga kwii-widgets ezi-5… okanye max uphume nge Isicwangciso seenyanga ezingama-99 oko kubandakanya iiwijethi ezili-150.
tags: Izilumkisoideshbhodiizazisoiithayile zemidiya yoluntuUmthetho
Meyi 7, 2012 kwi-12: 45 PM
Oku kuvakala ngathi sisixhobo esiluncedo ngokwenene kubathengisi! Enkosi ngokwabelana noDouglas.
Ngaba kukho abarhwebi obaziyo abayisebenzisayo/ ibe ngawaphi amava abo?
Meyi 7, 2012 kwi-12: 56 PM
Andifuni, Mary. Nangona kunjalo, siza kuqala ukuyivavanya kwi-arhente yethu kubathengi bethu.
Sep 12, 2012 ngo-6:28 PM
Ndacinga ukuba siya kuba nento enje kunye namawaka abaphuhlisi abakha iiwijethi ze-iGoogle, kwaye abasebenzisi bayakwazi ukuxuba kunye nokudibanisa nayiphi na iwijethi abayifunayo. Ngoku iGoogle yitheminali. Ukuba i-statdash inokusebenzela oku kwi-UX elungileyo, izandi zifanelekile ukujonga.